uchungechunge lwewashi le-apula 6: 40mm vs 44mm, iluphi uchungechunge lwamawashi ama-apula 6 olungcono kakhulu kuwe?
none Izindaba Nokubuyekezwa Uchungechunge lwe-Apple 6: 40mm vs 44mm, iluphi usayizi we-Apple Watch Series 6 olungele wena?
Uchungechunge lwe-Apple 6: 40mm vs 44mm, iluphi usayizi we-Apple Watch Series 6 olungele wena?
I- Uchungechunge lwe-Apple 6 , abaningi i-Apple Watch enemibala kuze kube manje, kunezici ezintsha ezithokozisayo zezempilo nokuqina, ukuqapha umoya-mpilo wegazi, kanye nohlelo lokusebenza lwe-ECG lokuqapha isigqi senhliziyo yakho. Ngaphezu kwalokho, zonke lezi zici ezipholile zigcwele ukwakheka okubukeka okuhle futhi kwesimanje kukanxande. Icala le-Apple Watch Series 6 liza nge-aluminium, insimbi engagqwali, noma titanium , futhi sichazile i- umehluko phakathi kwalezi zinketho . Kepha kuthiwani ngokulinganisa? Uma uzibuza phakathi kwe-Apple Watch Series 6 40mm no-44mm, funda lapho sixoxa ngomehluko.
Uchungechunge lwe-Apple 6 6mm
Ngokusobala, i-40mm eyodwa inesibonisi esincane ngokuqhathanisa ne-Apple Watch 6 44mm. Ngaphandle kosayizi wokubonisa noma kunjalo, imvamisa iwashi elincane. Isibonelo, uma kungenzeka ukuthi unesihlakala esincane, ungahle ufune ukuthola lokhu okuhlukile njengoba i-44mm enkulu ingabukeka futhi izwakale inamandla. Yazi, kungahle kungalingani!
U-Apple uthi i-40mm Apple Watch Series 6 izolingana nezihlakala eziyi-130-200mm, ngakho-ke gcina lokho engqondweni. Ngokwengeziwe, i-Apple Watch 6 40mm ingukuhluka okukhanyayo kwalokhu okubili, noma ngabe kungamagremu ambalwa nje.
Ukuboniswa kwe-Apple Watch Series 6 44mm kusobala ukuthi kukhulu kakhulu. Kodwa-ke, akubukeka nje kuphela. Isibonisi esingu-44mm sinamaphikseli amaningi, futhi umbhalo ungabonakala ukhudlwana kwezinye izindawo kuwo. Ngokwengeziwe, inesisindo esingamagremu ambalwa ukuthi i-40mm.
Izolingana nezihlakala ezingama-140-220mm, ngakho-ke uma isihlakala sakho sisohlangothini olukhulu, nakanjani kuzoba inketho engcono yokuya kulena engama-44mm.
Umehluko phakathi kwe-Apple Watch Series 6 40mm vs 44mm display:
Uchungechunge lwe-Apple 6 * 40mm: isibonisi singama-1.57inches ngesinqumo esingu-494 x 324
Uchungechunge lwe-Apple 6 6mm: isibonisi singama-1.78inches, isinqumo esingu-448 x 368
Uchungechunge lwe-Apple 6 (40mm)
$ 399Thenga kwa-Apple
$ 399Thenga kwaBestBuy
$ 399Thenga ku-Target
Ukuqondanisa usayizi wesihlakala se-Apple Watch Series 6
Yize ukufanisa usayizi wakho wesihlakala kubalulekile ukucabanga ngakho ngaphambi kokuthenga i-Apple Watch, abanye abantu bangaphuma ngaphandle kokukucabanga. Ngokuvamile, ukuze uthole induduzo engcono kufanele uthole i-Apple Watch elingana nosayizi wesihlakala sakho, kepha kwezinye izimo umehluko wosayizi wesihlakala ngeke unqume ukuthenga kwakho. Isibonelo, isihlakala sakho singaba cishe u-150mm, ngakho-ke ungaya kuzo zombili izinketho. Kodwa-ke, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuzama i-Apple Watch esitolo se-Apple sendawo ukuze uqiniseke ukuthi uyayithokozela indlela ebukeka ngayo kuwe nokuthi uzizwa kanjani ngayo esihlakaleni sakho.
Futhi, khumbula ukuthi ubude bamaqembu amaningi atholakalayo kuvamise ukufana nosayizi wokubuka. Lokhu kusho ukuthi imvamisa amabhendi amancane awatholakali kangako kuma-44mm namabhendi amakhulu we-40mm, futhi noma kungenzeki ukuthola i-apos, kungaba nzima ukwenza njalo.
Uchungechunge lwe-Apple 6 6mm vs 44mm: Intengo
Uchungechunge olukhulu lwe-Apple Watch 6 44mm luyindlela ebiza kakhulu. Kumodeli ejwayelekile ye-Apple Watch Series 6, i-40mm ibiza ngentengo engu- $ 399, kuyilapho i-44mm Apple Watch 6 ibiza u- $ 429. Uma ukhetha okuhlukile okubiza kakhulu, ngokwesibonelo okukodwa okunensimbi engagqwali noma ikesi le-titanium, intengo izophinda ibe cishe ngama- $ 50 ngaphezulu nge-44mm Apple Watch.
Hlola: Amadili amahle we-Apple Watch njengamanje
Ekugcineni, konke kuya ngokuthanda kwakho, ngoba ungahle uthande iwashi elikhudlwana, elinamandla, noma ngabe unesihlakala esincane, noma okuphambene nalokho. Ngaphandle komehluko ocashile oshiwo ngenhla ngosayizi nesisindo, ukwakheka, imibala yamacala namabhendi, kanye nazo zonke izici ze-premium nezithandekayo ze-Apple Watch Series 6 ziyatholakala kuzo zombili izinhlobo ezingama-40mm no-44mm.
Okuningi ku-Apple Watch Series 6:
isamsung galaxy rugby pro ukubuyekeza
shintshela kunombolo yokugcina verizon
kwenzekeni ngezingcingo ze-htc
Izindikimba ze-Samsung Galaxy S6 zifike ngokulandwa kwezigidi eziyisithupha
I-Pixel 3 iyashisa futhi iyavala ngenkathi ishaja abanye abanikazi
Ungabathumela kanjani oxhumana nabo be-Microsoft Outlook ngokushesha kudivayisi yakho ye-Android
Akuwona wena, kungokubanda: I-T-Mobile ne-AT & T ziphansi eTexas nakwezinye izingxenye zezwe
Imidlalo engcono kakhulu yokusinda ye-zombie ye-Android ne-iOS
I-iPad engcono kakhulu ongayithenga njengamanje i-iPad yakudala
I-Samsung Galaxy S6, S6 onqenqemeni ne-S6 esebenzayo ethola isibuyekezo se-Android 7.0 Nougat ku-AT & T.
Nakhu ukuthi kungani ishaja ye-Apple ne-apos ibiza kangaka
Kanjani: Umsuka i-Verizon Motorola DROID MAXX, Ultra, ne-Mini yakho